Home/Nepal/Nepali News/कम्युनिस्ट आवरण बेमतलबको हल्लखल्ल !
अरे यार … नेपाल पनि बडो विचित्रको देश छ । नाहकमा सबैलाई सबैको चासो नेपालजस्तो देश संसारमा अर्को छैन । कोही कहीँ जाला रे, कसैले कसैलाई ढोग्ला रे, जाओस्, ढोगोस् … यति साह्रो चर्चा किन ? बेमतलबमा मतलब किन ?
कन्टिर–बाबू परेशान छन्– ओल्बाले सोमबार पशुपतिनाथको पूजा गरेर लाख-बत्ती बालेको कुरा बडो चर्चामा छ । कन्टिर–बाबूले बुझ्न नसकेको कुरो नि, ओल्बा पशुपति गए त गए … यसमा यत्रो हाय–तौबा मच्चाउनुपर्ने के छ ?
धेरैको चित्त दुखाइ कम्युनिस्ट भएर पनि यसरी मन्दिर जाने भन्नेमा र’छ । अरे यार नेपालमा हालका दिनमा कोही खाँटी कम्युनिस्ट छन् र ? कन्टिर–बाबूलाई थाहा नभएको पनि हुनसक्छ । तर नेपालमा खाँटी कम्युनिस्ट बाँकी छन् भन्नेमा कन्टिर–बाबूलाई शङ्का छ ।
रह्यो ओल्बाको कुरा, उनी पशुपति थोडै पूजा गर्न गा हुन् ? उनी त मन्दिर र आर्यघाट निरीक्षणका सन्दर्भमा त्यहाँ पुग्दा अरूले पूजा गरिदिए, छेउमा उभ्याएर फोटो खिचिदिए त उनको के गल्ती ? फेरि त्यो लाख-बत्ती बालेको भनिएको पनि माघ १६ गते मनाइने सहिद दिवसको साताव्यापी कार्यक्रमको उद्घाटनमा दीप प्रज्ज्वलन गरेको रे ! संवाद सचिवालयबाट आएको यो सूचनाप्रति भने कन्टिर–बाबूको मनमा कुनै शङ्का छैन ।
नेपालीमा एउटा उखानै छ त– पशुपतिको जात्रा सिद्राको व्यापार । ओल्बाले पनि त्यहाँ राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, कूटनीतिक आदि–इत्यादि अनेक प्रकारका सिद्रा केलाएर आफूलाई फाइदा हुने व्यापार गर्‍या हुन सक्छन्, अरूलाई केको खसखस ? खाली हाम्रा ओल्बाको विरुद्धमा बात करता है !
कन्टिर–बाबू ओलीले पशुपतिमा पूजा गरे भनेर गलफत्ती गर्ने पक्षमा छँदै–छैनन् ! ओल्बाको पशुपति पूजा होस्, प्रचण्डको भैँसी पूजा होस् कि बाबुराम, माकुने, झलनाथहरूका नाना शक्तिपिठ गमन र जोगी–दर्शनका घटना हुन् … सबकासब सत्ताको खेतीपाती, राजनीतिक मुनाफा लागि गरिएका नौटङ्की न हुन् आखिर !
कन्टिर–बाबूलाई राम्रै थाहा छ– जसरी दिनमा तेल दिँदा नखाने तर राति उठेर कोल चाट्नेहरूको नेपालमा कमी छैन, उसैगरी कम्युनिस्ट आवरणमा जनता झुक्याउनेहरूको पनि कमी छैन ।